Warshadda Billadaha Kasbashada Shiinaha iyo soosaarayaasha | Kingtai
Bal eeg xulashadeena Biladaha Kasbashada, wax kasta oo guul ah Abaalmarinta Guusha waa abaalmarinta ugu fiican. Xirfadeena bilaha Gaaritaanka waxaa ka mid ah biladaha dahabka, qalinka iyo naxaasta iyo Calaamadaha Guusha.
Ku rogo roogga gaduudka Billadahayada Achievement Statuette, Biladaha Ribbada, Kiisaska Soo-Bandhigga, Koobabyada, Koobabka & Abaal-marinnada dhammaantood qiimo aad u hooseeya. Billadaha Dahabka ah & Maarta ah ee ku habboon munaasabad kasta oo lagu soo bandhigo oo ka timaadda Xafladaha Abaal-marinta, aqoonsiga Shirkadeed, Bandhigga Dugsiga ama in lagu abaalmariyo xubin kasta oo kooxda ka tirsan abaalmarinno badan oo dhinacyo badan leh. Waxaan sidoo kale haysannaa xulasho aad u wanaagsan oo ah Xargaha Tayada sare leh oo ka sarreeya 60 isku dhafan oo midabbo kala duwan leh oo ka soo jeeda Casaan, Caddaan & Buluug illaa Ribbon-keenna Rainbow. Kiisaskeena Soo Bandhigida Biladaha waa taabasho dhameystiran oo dhameystiran oo lagu heli karo midabyo kala duwan.
Dhammaantood si fudud ayaa shaqsi ahaan loogu xardhay Birta Xardho Birta ama Meelo Daabacan oo Daabacan oo Bilaash ah oo leh nashqadaada ama astaantaada.
Waxaan sidoo kale bixinaa Biladaha Macaamiisha, Lapel Pins & Badges, Ribbons & Presentation Cases oo lagu sameeyay naqshadeyntaada qiimo aad u hooseeya.
Ku sharfa kuwa sida adag u shaqeeya ee himilooyinkooda ku dhammaystira Billad Gaaritaan Gaar ahaaneed oo ka socota Abaalmarinta K2! Waxaan haynaa wax kasta oo ka soo baxa dahab, lacag iyo naxaas ama billadaha midabka dhalaalaya, dhammaantoodna waa sahlan yihiin in la habeeyo. Billadahayagu waxay la yimaadaan xulashadaada xarigga ku lifaaqan iyo, in yar oo dheeri ah, oo xardhan shaqsiyeed xagga dambe. Biladaha gelinta ayaa la heli karaa iyada oo xulashadaada ah warqadda dhejiska ah ee muujineysa aagag badan oo ka mid ah guulaha tacliimeed iyo isboorti. Marabtaa inaad isticmaasho nashqaddaada? Si fudud u dheji nashqaddaada waxaadna heli doontaa caddeyn naqshad gudaha 24 saacadood oo shaqo ah. Markaad ka faa'iideysato qiimo dhimistayada badan, waad iibsan kartaa wax badan oo keydin kartaa!
Hore: Dhimo pinel dhabel ku dheggan
Xiga: MEDALS WACYI GALIN